Hamela ny trano filokana ao amin’ny nosy Boracay malaza manerantany i Filipina na dia eo aza ny fanoherana eo an-toerana · Global Voices teny Malagasy
Lazain'ireo manampahefana hiteraka fidiram-bola bebe kokoa ho an'ny governemanta ny toeram-pilokana
Voadika ny 14 Oktobra 2021 3:24 GMT
Ilay torapasika fotsy malaza any amin'ny nosy Boracay. Sary avy amin'i Mong Palatino, nahazoana alàlana
Atahorana hivadika ho paradisa toeram-pilokana sy toeram-pizahan-tany manokana ho an'ny manan-katao ny toerana morontsiraka ambony indrindra any Filipina, Boracay, ka tsy azon'ny mpizahatany tsotra na mpibaby kitapo idirana.
Heverina ho toeram-pizahan-tany be mpitsidika indrindra any Filipina ny nosy Boracay amin'ny tora-pasika lavabe fotsy sy rano mangamanga mangatsakatsaka ary ahitana ny iray amin'ireo toerana fitsangatsanganana amorontsiraka malaza eto amin'izao tontolo izao. Toera-miavaka taloha ho an'ny mpizahatany eo an-toerana sy ireo vahiny mpibaby kitapo, mety ho lasa toeram-pilokana manokana ho an'ny mpanankarena io toeram-pialofana malaza io, na eo aza ny fanoherana sy fandavana eo an-toerana.
Tamin'ny 29 septambra 2021, nankatoa ny Volavolan-dalànan'ny Fahefana Fampandrosoana ny Nosy Boracay (BIDA-Ang) nosoratan'ny zanaky ny filoha, Paolo Duterte, kongresista avy ao Davao ny Antenimieram-pirenena Filipiana, izay anjakan'ny mpiara-dia “maro an'isa feno” an'ny filoha Rodrigo Duterte. Amin'ireo mpikambana 307 ao amin'ny Antenimieram-pirenena, 192 no nifidy izany raha toa ka fito monja no nanohitra ny volavolan-dalàna (mpikambana ao amin'ny antoko mpanohitra Makabayan ny enina amin'izy ireo).
Ny volavolan-dalàna BIDA ankilany ao amin'ny Antenimieran-doholona Filipiana kosa dia nosoratan'ilay Senatera Cynthia Villar, loholona mpanefoefo izay manana condominium Costa de la Vista sy ny Hotely Boracay Sands ao amin'ny nosy ny fianakaviany.
Fivadihana tanteraka tamin'ny fanambaran'i Duterte teo aloha fa handràra ny casinos filokana noho ny fikirizan'ny besinimaro nandritra ny fotoana fanakatonana ho “fanarenana ny tontolo iainana” naharitra enim-bolana tamin'ny taona 2018 ity fanapahan-kevitra ity. Nanambara ny Filoham-pirenena fa avelany hiasa ao Boracay ny casinos satria mila loharanom-bola fanampiny ny governemanta ao anatin'ny fihenan'ny toekarena nateraky ny areti-mandringana.
Nilaza ny Philippine Amusement and Gaming Corp (PAGCOR) fa nankatoa ny drafitra avy amin'ny Galaxy Entertainment Group ao Macau sy ilay mpanankarembe Andrew Tan hanangana trano filokàna marobe ao amin'ny Nosy Boracay izy.
Hamorona faritra fizahan-tany manokana ny volavolan-dalàna BIDA, manetsiketsika ny fahefana amin'ny bemidina, hetra ary fampiasam-bola, fankatoavana fahazoan-dàlana avy amin'ny vondrom-panjakana eo an-toerana (LGU) hatramin'ny governemanta nasionaly. Ny fahefana (amin'ny maha Vondrona Fehezina sy Iasan'ny Governemanta na GOCC azy) no hitantana ny Nosy Boracay manontolo sy ny (Tanàna) Caticlan ao Barangay amin'ny tanibe Malay any amin'ny faritanin'i Aklan izay misy ny seranan-tsambo sy ny seranam-piaramanidina.
Tamin'ny volana jolay 2018, notombanan'ireo Mpiray Ombon'antoka ao amin'ny LGU Malay fa mitentina 78,03 isanjaton'ny 508 tapitrisa Pesos Filipina (mihoatra ny 10,1 tapitrisa dolara amerikana) amin'ny vola miditra eo an-toerana ao amin'ny Kaominin'ny Malay ny vola miditra ho an'ny Boracay, ary ny 25 isanjaton'ny 2 lavitrisa mahery Pesos Filipiana (eo amin'ny 40 tapitrisa dolara amerikana) kosa ho an'ny faritany LGU any Aklan. Ahafahan'ny LGU hamatsy ara-bola ireo asa sosialy isan-karazany ireo vola ireo , saingy atahorana ho hahena na ho tapaka tanteraka izany raha misy sampam-panjakana hafa atsangana hanara-maso ny Boracay.
Nisy ny tombantombana tamin'ny taona 2018 fa tsy natao ho an'ny fanarenana ny tontolo iainana ny tena tanjon'ny filoha Duterte tamin'ny fanakatonan ny nosy fa ho fanesorana ireo vondrom-piarahamonina mahantra “manimba maso”.
Tamin'ny 19 septambra 2018, nilaza ny Departemantan'ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary (DENR-ang) fa olona 54.945 fotsiny amin'ny fotoana voafetra no zaka (mponina ara-tontolo iainana maharitra) ao amin'ny nosy, izay mpizahantany eo an-toerana sy vahiny ny 19 215 amin'ity tarehimarika ity. Mampiseho ny fanisam-bahoaka nataon'ny Fahefana misahana ny Antontanisa Filipina tamin'ny taona 2020 fa manana mponina eo an-toerana eo amin'ny 37 800 eo ny nosy Boracay
Manoloana ny fitomboan'ny fananganana trano fandraisam-bahiny, trano filokana sy condominium, voatery handao ny nosy ireo mponina mahantra ao amin'ny faritra be tanàna, heverina ho “manimba maso”.
Miahiahy ny mponina sasany sao hitondra olana ara-tsosialy amin'ny fivarotan-tena, famotsiam-bola, ary heloka bevava hafa ny trano filokana, mitovy amin'ny olana hita any amin'ny Philippine Overseas Gaming Operations na POGOs.
Ao anatin'izany fivoarana izany, maro ny Akeanons na Aklanons manohitra ny fametrahana faritra fizahan-tany manokana sy trano filokana ao Boracay, ahitana ireo olom-pirenena manohitra ny volavolan-dalàna amin'ny alàlan'ny haino vaky jery, media sosialy, ary fanangonan-tsonia any amin'ny biraom-panjakana mba hampiato ny volavolan-dalàna BIDA-GOCC sy ny trano filokana ao amin'ny nosy .
Tamin'ny Asabotsy 25 septambra, an-jatony ireo nanatevin-daharana ny valalamanjohy ahitana fiara 65 avy tao amin'ny tanàna renivohitra Kalibo ka hatrany Barangay Caticlan any Malay. Notarihan'ny mpitondra fivavahana sy seminarista taloha ao an-toerana ny valalamanjohy ary notohanan'ny antokom-pivavahana sy manampahefana ao an-toerana.
Marobe ihany koa ireo nanohitra ny fananganana ny Fahefana Fampandrosoana ny Nosy Boracay izay hiasa ho sampam-panjakana mitokana hitantana ny nosy.
Araka ny filazan'i Kim Sin Tugna ao amin'ny vondrona mpikatroka Bayan Aklan, mikendry ny hahatonga ny Nosy Boracay ho faritra mitokana ho an'ny sangany sy ho an'ny mpandaharahana sy orinasa vahiny ny Volavolan-dalàna BIDA. Nanampy i Tugna fa te hifehy ny hetsika ara-tsosialy sy toekarena rehetra ao amin'ny Nosy ny governemanta nasionaly. Nilaza izy fa santatry ny fanokafana ny nosy ho an'ireo fihariana iraisam-pirenena ny fanidiana ny nosy Boracay tamin'ny taona 2018. Nanambara ihany koa i Tugna fa fananan'ireo mpampiasa vola vahiny ankehitriny ny ankamaroan'ny tany ao Boracay ary tsy ho ela dia hobodoin'ireo trano filokana fananan'ny Shinoa.
Saika ny LGU rehetra dia manohitra ny GOCC any Boracay. Nilaza ireo manampahefana notarihin'ny governemanta Aklan, Florencio Miraflores sy ny solombavambahoaka Teoderico Haresco Jr ary Carlito Marquez fa hiteraka vondron'orinasa izay “hanala” ny fahefana avy amin'ny governemanta eo an-toerana fehezin'ny Fehezan-dalàm-panjakana Isa-Paritra ny volavolan-dalàna natambatra izay miandry fankatoavana ao amin'ny komitin'ny Antenimiera misahana ny orinasam-panjakana sy ny privatisation.
Nenette Aguirre-Graf, izay manana orinasa kely any Boracay naneho ny fihetseham-pon'ireo mpandraharaha namana ao an-toerana. Nilaza tamin'ny vaovaon'ny ABS-CBN izy hoe:
Ho anay dia somary mahatezitra ihany. Satria taorian'ny nilazany fa mankahala ny toeram-pilokana izy, tsy tia ny filokana izy, dia nahafaly anay rehetra izany. Saingy ankehitriny, amin'ity fanambarana vaovao ity, dia mampatahotra izany satria tsy fantatrao izay hitranga.
Manana sosokevitra momba ny fomba hamelomana indray ireo orinasa eo an-toerana ao amin'ny nosy koa izy:
Mandefasa vaksiny bebe kokoa ao amin'ny nosy ary manokatra izany ho an'ny fizahan-tany, ary mihevitra aho fa afaka hampiditra vola ilain'izy ireo isika, tsy mila manokatra trano filokana ao amin'ny nosy.
Nilaza ny Eveka Jose Corazon Tala-oc ao Kalibo fa “manana andraikitra hikarakara sy hiaro ny Boracay” ny Aklanons
“Manao antso avo amin'ireo mpitondra antsika any amin'ny faritany aho mba tsy hamela ny toeram-pilokana handrava ny tany malalantsika,” hoy i Tala-oc tamin'ny taratasy pastoraly iray. Nampiany hoe:
Fa maninona no mila mametraka toeram-pilokana isika? Ny filokana dia lalaom-bintana izay mandrisika kolontsaina mifanohitra amin'ny fihevitra marim-pototra.
Ity fakana tsikelikely ny fiheveran'ny olombelona amin'ny alalan'ny filokana ity dia sakana lehibe manokana izay mety hanjary ho tsy inona fa korontana aretina ara-tsosialy. Hampihena tsikelikely sy hanimba ny fari-pitondrantenan'ny olona izany amin'ny farany.